Ngaba U-Penny Unzima Ngempela 3?
Inqanaba le- Mohs lobunzima bommbiwa linamaminerali ahlukeneyo alishumi, kodwa ezinye izinto eziqhelekileyo zingasetyenziselwa: ezi zibandakanya umnxeba (ubunzima obu-2.5), isitya somnxeba okanye iglasi yefestile (5.5), ifayili yensimbi (6.5), kunye ipenny.
I penny isoloko ibelwe ubunzima beenxa zonke 3. Kodwa ndiye ndaqhuba iimvavanyo kwaye ndafumanisa ukuba oku akuyi nyaniso.
I penny yatshintshile ekubunjeni kwiminyaka ukususela ngo-1909, xa i-Lincoln yokuqala yeklasi yakhishwa.
Ukubunjwa kwalo kwacaciswa njengama-95 ekhulwini obhedu kunye ne-5 pesenti kunye ne-zinc, i-alloy echazwe njengethusi. Ngaphandle kwonyaka wemfazwe ka-1943, iipenki zazingezethusi ukusuka ngo-1909 ukuya ngowe-1962. Iipennies kule minyaka engama-20 elandelayo yayibhedu kunye ne-zinc, ubugcisa bebhedu kunobhedu. Kwaye ngowe-1982 ubukhulu becala babuye bahlaselwa kangangokuba iipennies namhlanje zingama-97.5 e-zinc zincinci zijikelezwe ngqabunga elincinci, elincinci lebhedu.
I penny yam yokuvavanya yayivela ngo-1927-i-formula yangaphambili yobhedu. Xa ndivavanya nge penny entsha, andiyikhanga enye, ngoko kuyacaca ukuba ubunzima beepeneni abukatshintshi. Ipenny yam yayingayi kukhangela i- calcite ngaphandle kokuba ndithwele phantsi koko, kodwa i-calcite (umgangatho wobunzima obu-3) yanciphisa ipenny.
Ngomdla wesayensi, ndavavanya ngekota, i-dime kunye ne-nickel malunga ne penny kunye ne-calcite. Ikota kunye ne-dime yayincinci ngaphezu kwe penny kunye ne-nickel yayinzima kancinci, kodwa bonke bahlatywe yi-calcite.
Andizange ndizame ngeemali zesiliva-nangona kunjalo, kwi-hunch yangasendle, ndavavanya ipennyiti yentloko yaseNdiya ukusuka ngo-1908 kwaye ndafumanisa ukuba yanyathela zonke ezinye izinto kwaye ayizange ihlatywe.
Ngaloo ndlela, zonke iimali zemali zaseMerika aziyikuhlaziya i-calcite ngaphandle kwemigudu emininzi, kanti i-calcite iyabaxhamla ngokulula.
Oku kubanika ubunzima obungaphantsi kwe-3, oko kukuthi, 2.5, ngelixa i-penny yentloko yaseNdiya inobunzima obukhulu ngaphezu kwe-3, oko kukuthi, 3.5. Ipenny yentloko yaseNdiya yayinomxholo ofanayo kunye ne-Lincoln penny, kunye ne-zinc kunye ne-tin edibeneyo eyenza ama-5 ekhulwini, kodwa ndikhankanya ukuba ipenki endala yayine-tin. Kodwa mhlawumbi ipenki enye ayiyiyo vavanyo elungileyo.
Ingaba kukho na isizathu sokuthwala ipenki xa i-fingernail nayo ibunzima 2.5? Ndicinga ukuba zimbini: Enye, unokuba nezipikili ezilula; kwaye ezimbini, unokukhetha ukutshiza ipenisi kunokuba izikhonkwane zakho. Kodwa isazi se-geologist sinokuthi sithwale i-nickel endaweni yoko, kuba kwimeko engxamisekileyo inokunyusa imitha yokupaka.
Umxholo omhlophe kunye neBrain yakho
Izinto Ezifanele Uzazi Ngayo Ngokwemvelo Yezinto Eziphilayo
I-Biographer Actress uDorothy Dandridge
Top 10 Ed Sheeran Iingoma